Jacob Zuma oo guursaday xaas afraad - BBC News Somali
Jacob Zuma oo guursaday xaas afraad
24 Abriil 2012
Image caption Jacob Zuma waa 70 jir
Jacob Gedleyihlekisa Zuma waxuu dhashay 12 April 1942, waxuu ka soo jeedaa qabiilka Balaaran ee Zuluuga la yiraahdo, ee dega gobolka Kwa Zulu-Natal,
Jacob Zuma 70 jir, wuxuu guursaday 6 jeer, haweenay wuu furay midna way ka dhimatay. Haatan wuxuu qabaa 4 haween ah oo uu mida u danbaysay uu guursaday 20 Apr 2012. Gabadhan u danbaysay oo la yidhaahdo Gloria Bongekile Ngema waxaa loo dhigay xaflad si aad u wayn loo soo agaasimay oo ka dhacday tuuladii uu ku dhashay Zuma oo la yidhaahdo Nkandla. Waxaa ka qayb galay xaflada haweenkiisa kale oo saddex ah.
Zuma, wuxuu sida dhaqanka Zulu-gu yahay oo gabadhan ka bixiyay yarad lo' ah oo la siiyay reerkooda. Wuxuuna ciyaar dhaantadoo kale ah kaga qayb galay tuuladaas isaga oo qaba dharka hiddaha iyo dhaqanka ee Zulu-ga oo laga sameeyo harko wuxuuna watay bilaawe.
Wuxuu leeyahay 21 caruur ah.
Zuma waxaa kale oo u doonnan gabadh ka dhalatay qoyska reer boqor ee Swaziland.
Xaaskiisii ugu horaysay ee uu bilcaamiyay waxay ahayd Sizekele Khumalo, 1959-kii ay isguursadeen, walow ay mar hore kala tageen, islaantaasina waa mida hada ka ah, dalka Koonfur afrika, wasiirka arimaha gudaha,
Waa nin Ciyaaraha jecel, sida heesaha dhaqanka, iyo waliba Jaaska ama goob ka ciyaarka, mararka qaarna madaxweyne Jacob Zuma waabaa uu heesa,
Dadka sida aadka ah u yaqaana Madaxweyne Jacob Zuma waxay ku tilmaamaan inuu yahay nin naago jecel oo shabeel naagood ah. waa aftahan hadal helid og, oo ka soo badbaaday shirqoolo dhowr oo lagu damacsanaa in saaxada siyaasada looga saaro,
Image caption Madaxweynaha iyo mid ka mid ah xaasaskiisa
Nolol ahaan Jacab Zuma, waxa uu ka dhashay qoys dhaqanka Afrikaanimada ku faana,Zuma waxuu cunaa hilibka cayriinka ee dadka Zuluuga ah ay cunidiisa ku caanka yihiin,waliba markuu hilibka cayriinka cunayo Saxaafada ayuu u yeeraa, hab dhaqankiisa waxaa ka mid ah,inuu markuu qudbaynayo, af ingiriis ku hadlin, oo waxuu isticmaalaa af Zuluuga,Madaxweyne Jacob Zuma waligiis waxbarasho aas aasi ah ma helin, aabihiis waxuu dhintay isagoo aad u yar, hooyadiisna waxay jaariyad u ahayd nin caddaan, oo magaalada Durban deganaa.
Balse Jacob Zuma af ingiriiska si aad ah ayuu u yaqaanaa oo waxuu ugu hadlaa maxaa kaa galay,Madaxweyne Zuma, waxuu aaminsan yahay wada noolaanshana dadka bani'aadamka oo afka Zuluuga lagu yiraahdo, upuntu oo la micno ah, wada noolaansho ama qof walba iskiis ha u noolaado,
Jacob Zuma wax balwad ah malahan, qamriga iyo sigaar-kana waxuu joojiyayay, berigii laga soo daayay, xabsiga Roban Island ee isaga iyo Nelson Mandela ay, mudo 10 Sano ah ku wada xirnaayeen,Wuxuu yidhi khamrada waxaa loogu talla galay in dadkanaga aakharo iyo aduunba lagu seejiyo.
Waxaa la yaab leh, in 10-kii sano ee uu xirnaa. aanan waligiis la soo booqanin, ehel walaa saaxiib midna.
Zuma waxaa lagu canbaareeyaa inuu yahay nin haweenka jece. Eedaynta noocaas ah isagu wuu diidaa oo waxuu yiri, anigu ma ihi nin munaafaq ah oo qarsada naagaha.
Saxaafada Konnfur Afrika oo uu xooggeeda gacanta ku hayaan dadka Caddaanka ahi waxay aad wax uga qoraan nolosha qoysaska Zuma waxayna ku canbaareeyaan inuu yahay nin tusaale xun u noqonaya dhalinyarada oo tusaya in haween badan la guursado ama lala saaxiibo.
Ilaa haatan wali Jacob Zuma ma uusan cayimin haweenay noqota hooyada ummadda ama xaaska 1aad ee Madaxwaynaha. Arintan wuxuu ku cillaynayaa Zuma inay tahay dhaqan shisheeye (Reer Galbeed) wuxuu leeyahay haweenka oo dhan waa hooyooyinka ummadda.
Waxaa kale oo saxaafada wadanku ay si wayn uga hadlaysay maalmahan kharashka ku baxaya qoyskan faraha badan iyada oo xaas waliba ay xaq u yeelaynayso inay hesho xuquuqo ay ka mid yihiin biilasha, guryaha, illaalo, caafimaad iyo safarro ay dhammaan dawladu bixiso.
Hadda ka hor ayaa lagu eedeeyey, inuu kufsaday haweenay 31 jir ahayd. Haweenaydan oo uu dhalay nin ay madaxweyne Jacob Zuma saaxiib ahaayeen, Berigaasi muusan inkirin inuu gabadhaasi la galmooday ama uu naagaystay,laakiin wuxuu ku dooday inay haweenaydaasi raali ka ahayd, inay wada seexdaan. Maxkamad in mudda ah socotay ayaa Jacob, Zuma wax danbi ah ku wayday oo waa la cafiyay.
Madaxweyne Jacob Zuma Cadaanka waxay ku tilmaamaan nin dhaqanka Afrikaanka iyo midka Zulu-ga ku dhagan.
Maqal Itobiya oo ku dhawaaqday sharci lagu mideynayo manhajka waxbarashada
Itobiya oo ku dhawaaqday sharci lagu mideynayo manhajka waxbarashada